ရှကျပွုံးလေးတဈပှငျ့ – My Blog
ကြှနျတေျာ့အဖေ နောကျအိမျထောငျပွုတော့ ကြှနျတျောရှဈနှဈသားလောကျပဲရှိပါသေးတယျ။ကြှနျတေျာ့မိထှေး မှာ သမီးတဈယောကျပါလာပါတယျ။သူကလညျး ကြှနျတျောနဲ့ရှယျတူပါပဲ။မမေနေ့ရောကိုအစားဝငျလာတဲ့သူ ဖွဈလို့ သူတို့ သားအမိနှဈယောကျကို ကြှနျတျောလုံးဝကွညျ့လို့မရပါဘူး။နညျးနညျးအရှယျရောကျလာတော့မှ မမေလေေးရဲ့စတေနာ တှေ၊မတ်ေတာတှကေိုနားလညျလာခဲ့ပါတယျ။ဟိုကောငျမလေးသီရိနဲ့ကတော့ တစောငျးစေးနဲ့မကျြခြေးပေါ့။ကြှနျတျောက ကိစ်စတျောတျောမြားမြားမှာအလြှော့ပေးခဲ့ပမေယျ့ သူကတော့ကြှနျတေျာ့ကိုဘယျလိုမှကွညျ့မရပါဘူး။သူ့အမကေ ကြှနျ တေျာ့ကိုအရေးပေးလို့လားမသိပါ။
ထားပါတော့လေ..ဒါတှကေငယျငယျတုနျးကပါ။ အခုတော့ကြှနျတျောရောသူပါ ဒဂုံတက်ကသိုလျမှာတကျနကွေပါတယျ။ကြှနျတျောကဒုတိယနှဈ၊သူကပထမနှဈပေါ့ ကြှနျတေျာ့မှာလညျးရညျးစားလေးဘာလေးနဲ့ပေါ့။သူကတော့ရှိသလိုလိုပဲ။ခကျတာက ကြှနျတေျာ့ကောငျမလေးက စာဂပြိုး ဗြ။ရုပျရှငျလညျးမကွညျ့ရ။ပနျးခွံလညျးချေါမရနဲ့တျောတျောလေးတငျးတယျဗြာ။ဒါနဲ့ တဈနေ့…. ‘ခဈြ ရုပျရှငျသှားကွညျ့ရအောငျလေ’ ‘မနကျဖွနျ ကြူတိုရီရယျရှိတယျကှာ။မကွညျ့ခငျြပါဘူး။ပွီးရငျမောငျကလကျသိပျသရမျးတာပဲ’ ‘မဟုတျတာကှာ။ကြူတိုရီရယျကဘာအရေးလဲ။လိုကျမှာလားမလိုကျဘူးလားပွော’ ‘မလိုကျခငျြလို့မဟုတျပါဘူးကှာ။ကွောကျလို့ပါ။’ ‘ဒါဆို ကနျတငျး သှားမယျလေ’ ‘မောငျကလညျးကှာ ဟိုဟာတှလောနလေို့ နောကျမှနျောအခုစာကကျြလိုကျအုံးမယျနျော’ ‘အေးပါကှာ၊ပွနျရငျကောလိုကျပို့ရမလား’ ‘မပို့နဲ့ ဖဖေဝေငျကွိုလိမျ့မယျ’ ‘သှားပွီ။ဒီနတေ့ော့ဘူပိတျပွီ ‘လို့စိတျထဲကနရေရှေတျရငျး ဖဲရှုံးလာတဲ့မကျြနှာနဲ့ ထှကျလာခဲ့ပါတယျ။
စိတျညဈညဈနဲ့ အပျေါဆုံးထပျတကျပွီးဆေးလိပျသောကျမယျဆိုပွီး တကျလာရာ အပျေါမှာလူရှငျးနတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဖွတျလြှောကျလာရငျး အသံကွားလို့အသာလေးခြောငျးကွညျ့လိုကျရာ အတှဲတဈတှဲကိုတှရေ့ပါတယျ။ အောငျမယျ..ဒငျးကပေါကျစီစားနပေါလား။ကောငျမလေးမကျြနှာကိုတော့မမွငျရဘူးပေါ့။ဟိုကောငျ့လကျကလညျး အငွိမျကိုမနဘေူးကောငျမလေးပေါငျကွားထဲမှာ။ဆျောလေးကလညျးအလိုကျသိပါ့ ဒုတျကိုကိုငျပေးနပေါလား။ရုတျတရကျ ကောငျမလေးက ဟိုကောငျ့ရငျခှငျထဲကထလိုကျတော့ ကြှနျတေျာ့ဒေါသတှေ ထောငျးခနဲဖွဈလာပါတော့တယျ။ဘယျသူ မြား လဲမှတျတယျ။
ဒျေါသီရိကိုး ဒငျးတောငျမှအမွီးပေါကျနပွေီပဲ။ ကြှနျတျောလညျး ကိုယျနဲ့မတညျ့ပမေယျ့ ဒီလိုမြိုးကြှနျတေျာ့ရှမှေ့ာမွငျရတော့ သနားလညျးသနားတယျ။ဒေါသစိတျနဲ့ အတငျးဝငျကာဆောငျ့ချေါခငျြတဲ့စိတျတှလေညျး ပျေါလာခဲ့ပါတယျ။လှနျလှနျကြူးကြူးမဖွဈခငျပေါ့။တျောသေးတာပေါ့ ဟို ကောငျတှသောတှသှေ့ားရငျ ကြှနျတေျာ့မကျြခှကျကွီး ဘယျသှားထားရပါ့မလဲ။ကငျမရာသာပါလာခဲ့ရငျ ဒငျးတို့ရုပျတှေ နကျထဲမှာ ပလူပြံနလေောကျပွီ။ဟာဟာ..ဒငျးကလေးကဟိုကောငျ့ကို ပလှတေောငျမှုတျပေးနပေါလား။
ကြှနျတျောလညျး ကိုယျ့ညီမလိုဖွဈနပေမေယျ့ ကွညျ့နရေငျးလီးကတောငျလာပါတယျ။လီးတောငျနရေငျးက မကောငျးတဲ့အတှေးတှပေါဝငျ လာပွီး ဆငျကွံ ကွံနမေိပါတယျ။ဟာ..ဟုတျပွီ။… တဈယောကျတညျးကြိတျပွုံးလိုကျရငျး ဆကျကွညျ့နမေိပါတယျ။အတျောကွာတော့ အောကျကတကျလာတဲ့အသံ တှကွေားတော့သူ့အကောငျ ခပျသုပျသုပျလေးထှကျသှားတာကိုတှလေို့ကျတော့ ကြှနျတျောလညျးအခနျးဝမှာစောငျ့နပေါ တယျ။ဟော..လာပါပွီမရှခြေော။ကြှနျတေျာ့ကိုမွငျတော့ သူတျောတျောလေးကိုထိတျလနျ့သှားပါတယျ။ ‘ကဲ..ဘယျလိုလဲ တျောတျောလေးမှပြျောကွရဲ့လား။’ ‘ကိုမိုး..နငျဘယျတုနျးကတညျးကရောကျနတောလဲ’ ‘ငါ့ကိုဘာမှလာရှငျးပွမနနေဲ့၊ငါအကုနျမွငျပွီးပွီ။အိမျကမြှနငျ့အမနေဲ့ရှငျးကွပတေော့’ သူဘာမှပွနျမပွောနိုငျပဲ မကျြနှာကိုလကျဝါးအုပျကာ ငိုခလြိုကျပါတယျ။နောကျမှ.. ‘ကိုမိုးရယျ ငါတောငျးပနျပါတယျ။
မမေသေိရငျသတျလိုကျမယျ။ပွနျတော့မပွောပါနဲ့နျော’ ‘နငျ့ကိုယျနငျ နိုငျငံခွားရောကျနတေယျမြားမှတျနလေားဟငျ ဒါမွနျမာပွညျဟဲ့’ ‘တျောပါတော့..ကိုမိုးရယျ ငါတောငျးပနျပါတယျဟာ..ငါ့ကိုသနားပါ။’ ‘တျောပွီ ငိုမနနေဲ့တော့ ပွနျကွမယျ ၊ အိမျကမြှငါစဉျးစားလိုကျအုံးမယျ ပွောသငျ့မပွောသငျ့’ ‘လုပျပါဟယျ။ငါကြေးဇူးတငျပါတယျ။ငါနငျ့ကြေးဇူးကိုမမပေ့ါဘူး’ ‘အေး နငျ့စကားတညျပါစနေျော၊ ညဖကျ လူကွီးတှအေိပျရငျ ကားဂိုဒေါငျဘကျကိုလာခဲ့ ၊နငျနဲ့ငါဆှေးနှေးမယျ’ ‘ဟုတျ’ ‘ကဲပွနျကွစို့၊အျောနအေုံး..ငါ့မှာပိုကျဆံပွတျနတေယျ နငျ့မှာရှိရငျ ၅၀၀၀ လောကျပေးအုံး’ လို့ဆိုကာ ခပျတညျတညျနဲ့ငှညှေဈလိုကျတော့ ပွာပွာသလဲ ပိုကျဆံအိတျကိုဖှငျ့ကာ ပိုကျဆံတဈထပျကိုမရတေော့ပဲ လကျထဲအတငျးထိုးထညျ့လိုကျပါတယျ။
‘အေး..နငျကောငျးကောငျးပွနျနျော၊ဟိုဝငျဒီဝငျလုပျမနနေဲ့’ ‘စိတျခပြါ’ ဆိုကာကြှနျတေျာ့ရှကေ့နထှေကျသှားပါတော့တယျ။ ညနဖေကျအိမျပွနျရောကျတော့ သူကြှနျတေျာ့အပျေါမှာ လိုတာထကျကိုပိုပွီး ဂရုတစိုကျလုပျပေးနပေါတယျ။မကျြလုံး လေးတှကေတော့ ကြှနျတေျာ့ကိုအသနားခံတဲ့မကျြလုံးလေးတှနေဲ့ပေါ့။မမေလေေးကတောငျ ‘သားနဲ့သမီးအခုလို ခဈြခဈြခငျခငျတှရေ့တာ အရမျးဝမျးသာတယျကှယျ’ လို့တောငျခြီးမှမျးပါတယျ။ ညစာစားပွီး ကြှနျတျောသူ့နားကိုကပျပွီး မမေအေိပျရငျငါ့ကိုလာချေါ လို့ပွောခဲ့ကာ အခနျးထဲဝငျပွီးစာဖတျနပေါတယျ။
ဆယျနာရီကြျောကြျောလောကျကတြော့ ကြှနျတေျာ့အခနျးတံခါးကိုလာခေါကျပါတယျ။ ‘ကဲလာ ကားဂိုဒေါငျဘကျကိုသှားရအောငျ’ ‘ဒီမှာပဲပွောပါလားကိုမိုးရယျ’ ‘ဟဲ့..ဒီမှာဆို နညျးနညျးလေးအသံကယျြတာနဲ့ လူကွီးတှနေိုးကုနျမှာပေါ့’ လို့ပွောကာ သူ့လကျကိုဆှဲကာ နောကျဖေးပေါကျကတဆငျ့ ကားဂိုဒေါငျထဲကိုချေါခဲ့ပါတယျ။ကားဂိုဒေါငျထဲကကှဈပဈြလေးမှာ ထိုငျကွရငျး ‘ကိုမိုး..ဘာပွောမှာလညျးဟငျ’ ‘မပူပါနဲ့ နငျ့ကိစ်စကိုဆှေးနှေးပေးမှာပါ’ ‘မမေကေို့တော့မတိုငျပါနဲ့နျော’ ‘အေးလေ ဒါနငျ့အပျေါမူတညျတာပဲ၊ကဲရှငျးစမျးပါအုံးနငျ့ကိစ်စ၊နငျ့အကောငျကဘယျသူလဲ၊ဘယျကလဲ’ ‘ဟို..ဟို..ဇူးကပါ။
တာမှမှောနပေါတယျ။ဟုတျပွီ..နငျတို့ဒီလိုခြိနျးတှတေ့ာဘယျနှဈခါရှိပွီလဲ’ ‘သုံးခါလောကျရှိပါပွီ’ ‘နငျ့ကောငျကနငျ့ကိုဘာတှလေုပျလဲသခြောပွောစမျး’ ‘ဟာ..ကိုမိုးကလညျးရှကျစရာ’ ‘အျောဒါကတြော့ရှကျတယျလား။ငါလုပျလိုကျရသတေော့မယျ။အေးမပွောရငျလညျးရတယျ’ လို့ပွောလိုကျတော့သူက ပွာပွာသလဲနဲ့ ‘စိတျညဈပါတယျ။ပွောပါ့မယျ။မမေကေို့တော့ပွနျမတိုငျပါနဲ့နျော’ ‘ဟုတျပွီ..ငါမေးတာကိုအစအဆုံးဖွပေတေော့’ ‘ဟုတျ’ ‘နငျ့ကောငျကနငျ့ကိုခြိနျးတှရေ့ငျဘာလုပျသလဲ။
ငါလညျးပညာယူမလို့’ ‘နမျးပါတယျ။နှုတျခမျးကိုပါ’ ‘နောကျတော့ရော’ ‘ငါမဖွခေငျြဘူးဟာတျောပါတော့’ ‘မရှညျနဲ့၊ဒါဆိုငါသှားမယျ’ လို့ပွောလိုကျရငျးလှညျ့ထှကျလိုကျတော့ သူကလကျမောငျးလေးကိုဆှဲကာ ‘နပေါအုံး။ပွောပါ့မယျ။ပွောပါ့မယျ။ပွနျထိုငျပါ’ လို့တောငျးပနျပါတယျ။ ‘ကဲပွောလေ’ ‘နို့ကိုကိုငျပါတယျ’ လို့ပွောကာမကျြနှာနီမွနျးပွီးခေါငျးငုံ့သှားပါတယျ။ ‘ဆကျပွောလေ၊နောကျကော စို့ရောမစို့ဘူးလား’ ‘စို့ပေးပါတယျ။
‘နငျကရောအသာတကွညျအစို့ခံတာပဲလား’ ‘ကိုမိုးနငျတျောတျောဆိုးတယျနျော၊ငါ့ကိုအကွပျကိုငျတယျ’ ‘မဖွခေငျြဘူးလား’ ‘ဟို..ဟို..ငါလညျးထူပူနတေော့ မရုနျးမိဘူးဟာ’ ‘နောကျကော..စောကျဖုတျကိုနှိုကျသေးလား’ ‘အငျး’ ‘သခြောပွောလဟော’ ‘နှိုကျပါတယျ။’ ‘နှိုကျတယျဆိုတာဘယျလိုလဲ။ဘောငျးဘီပျေါကနပှေတျပေးတာလား၊အထဲကိုနှိုကျတာလား’ ‘၂ ခုစလုံး’ ‘နငျကမရုနျးဘူးလား။’ ‘ရုနျးတော့ရုနျးတာပဲငါ.ငါမပွောတတျဘူးဟာ၊နငျကလညျးဘာတှမေေးနမှေနျးမသိဘူး’ ‘အဲဒီလိုအနှိုကျခံရတော့ကော ကောငျးလား၊နောကျကောဘာလုပျသေးလဲ’ ‘နငျအကုနျမွငျပွီးသားမဟုတျလား’ ‘အေး…ဒါပမေယျ့ငါကွားခငျြလို့’ ‘နောကျတော့ သူ့ဟာကွီးကိုလကျနဲ့ကိုငျခိုငျးတယျ’ ‘နငျကကိုငျတာပဲလား’ ‘ငါလညျးငွငျးပါတယျဟာ၊
ဒါပမေယျ့အောကျကနကေလိနတေော့ဘယျကနဘေယျလိုလုပျပေးမှနျးတောငျမသိဘူး’ ‘နောကျကောဘာလုပျခိုငျးသေးလဲ’ ‘ပါးစပျနဲ့စုပျခိုငျးတယျ’ ‘နငျကစုပျတတျလို့လား’ ‘ငါလညျးဖီးတှအေရမျးတကျနလေို့ သူခိုငျးသမြှမငွငျးမိပါဘူး’ ‘နငျ့ကို အပွီးအထိစုပျခိုငျးလား’ ‘ပထမတခါတော့ လကျနဲ့လုပျပေးတာနဲ့ပွီးသှားတယျ နောကျတဈခါကတြော့ပါးစပျထဲမှာပွီးတယျ’ ‘နငျထှေးပဈလိုကျလား’ ‘ဟငျ့အငျးငါကထှေးမလို့သူကငါ့ကို မြိုခခြိုငျးတယျ။’ ‘အယျတယျဟုတျပါလား။နငျ့ဇာတျလမျးနားထောငျရတာ ငါတောငျလီးတောငျလာပွီ ဒီမှာကွညျ့စမျး’ လို့ပွောက တောငျမတျနတေဲ့ကြှနျတေျာ့လီးတနျကို သူမွငျရအောငျလုံခွညျလေးအသာလြှောပွလိုကျပါတယျ။
‘အိုး..နငျနျောနငျ’ ‘သခြောကွညျ့စမျး..နငျ့ကောငျနဲ့ငါဘယျသူကပိုကွီးလဲ’ ‘ဟာ…သခေငျြတာပဲဟာ..နငျကပိုကွီးတယျ ငါသှားလို့ရပွီလား’ ‘နအေုံး..ငါတဈခုစဉျးစားမိတယျ။နငျငါ့ဟာကွီးကိုလာကိုငျကွညျ့စမျး’ ‘အိုး..မဟုတျတာဟယျ၊နငျမကွံကောငျးမစညျရာတှဟော’ ‘ကွံကောငျးပါတယျ။နငျတောငျဟိုကောငျ့ကိုလုပျပေးနကေပြဲ၊နငျ့ကောငျလို့စိတျထဲထားလိုကျပေါ့’ ‘ငါမလုပျပါရစနေဲ့ဟာ၊ငါနငျ့ကိုရှိခိုးပါတယျ’ ‘အခုမှမရတော့ဘူး သီရိ ငါဖီးတှအေရမျးတကျနပွေီ’ ‘ငါ့ကိုလညျးသနားပါဟယျ။
နငျနဲ့ငါနဲ့မောငျနှမလေ’ ‘ဘာမောငျနှမလညျး..ဘာမှမတျောဘူး’ ‘ဟို..ဟို..မသငျ့တျောလို့ပါနျော’ ‘တျော မတျောသိခငျြရငျ ထညျ့ကွညျ့မယျလေ’ ‘ကိုမိုးရယျ နငျသိပျရကျစကျတာပဲ..နငျငါ့ကိုအနိုငျကငျြ့တယျ’ ‘ငါဘာမှ မနှိပျစကျပါဘူး။နငျတောငျမှဟိုကောငျ့ခိုငျးသမြှလုပျပေးနတောပဲ’ ‘ကိုမိုး..ငါငိုခငျြလာပွီဟာ’ လို့ပွောကာုငိုခလြိုကျပါတယျ။ ‘ဒီမယျ..သီရိ နငျငိုနလေညျးအလကားပဲ နငျ့ကိုငါတဈခုပွောမယျငါ့ကိုကွညျ့စမျး’ ‘ပွော..ဘာပွောမှာလညျး’ ‘ငါပွောသလို လုပျရငျ ငါနငျ့ကိစ်စတှကေိုမသိခငျြယောငျဆောငျနလေိုကျမယျ။ကဲအခုတော့ဒီကိုကွှ’ လို့ပွောလိုကျရငျး သူ့ကိုယျလုံးလေးကိုထူလိုကျပါတယျ နောကျတော့မကျြနှာခငျြးဆိုငျလိုကျရငျး ‘ဒီမယျ..ငါ့ကိုကွညျ့စမျး’ လို့မကျြနှာကိုလှညျ့လိုကျတော့ သူမကျြနှာလှဲသှားပါတယျ။ ‘သီရိ..ဒီဖကျလှညျ့စမျး’ လို့ပွောရငျးမကျြနှာကိုခပျကွမျးကွမျးေးလလှညျ့လိုကျတော့..အံကိုကြိတျကာကြှနျတေျာ့ကို ကွညျ့ပါတယျ။
မကျြရညျတှအေရှဲသားနဲ့ပေါ့။ ‘ဘယျလိုလဲငါပွောတာဖွဈမလား’ ‘အေးပေါ့လေ..နငျကနိုငျကှကျရထားတာကိုး’ လို့ပွောကာမကျြစိမှိတျထားပါတယျ။ ‘သခြောပွီနျော’ လို့မေးလိုကျတော့ ခေါငျးလေးကိုညိတျပွပါတယျ။ ‘အေးဒါဆိုရငျ ငါ့လီးကိုလာကိုငျပတေော့’ လို့ပွောလိုကျတော့ ဆောငျ့ကွီးအောငျ့ကွီးနဲ့လာကိုငျပါတယျ။ ‘ဖွညျးဖွညျးလုပျပါဟ..တျောကွာပွုတျထှကျသှားမယျ’ ‘သလေညျးအေးတာပဲ’ ‘သီရိ နငျအသားနာခငျြလို့လား သခြောလုပျပေးလေ’ လို့ပွောလိုကျတော့ ‘ကိုငျထားတာလေ နငျမသိဘူးလား’ ‘ကိုငျထားမှနျးတော့ငါလညျးသိတာပေါ့ နညျးနညျးပါးပါးပှတျပေးလေ နငျ့ကောငျကိုလုပျပေးသလိုမြိုးလေ’ လို့ပွောလိုကျတော့မှ လကျကိုရှတေို့းနောကျငငျလုပျပေးပါတော့တယျ။ ‘ဘယျလိုလဲ နငျ့ကောငျဟာနဲ့ငါ့ဟာဘယျဟာကကိုငျလို့ကောငျးလဲ’ လို့မေးလိုကျရာ ‘တခွားစီ’ လို့မဲ့ကာရှဲ့ကာပွောလိုကျပါတယျ။လုပျပေးနရေငျးကြှနျတျောက သူ့ကိုဆှဲဖကျလိုကျရငျးပါးလေးကိုနမျး လိုကျပါတယျ။
သူကတှနျ့သှားရငျးရုနျးလိုကျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ကြှနျတျောမလှတျပေးပါဘူး။ ‘နငျကငါနမျးတာတောငျဘာဖွဈရတာလဲ ဒီလောကျတောငျဖွဈလှတာ’ လို့ပွောကာသူ့နှုတျခမျးကိုအတငျးစုပျလိုကျ ပါတယျ။သူကလညျး အပွငျးအထနျရုနျးပါတယျ။ကြှနျတျောလညျး သူ့စောကျဖုတျနရောကို စမျးလိုကျတော့ စိုရှဲနတောကို သိလိုကျရပါတယျ။ဒီတော့မှ ‘သီရိ..နငျလိမျမနနေဲ့တော့ နငျလညျးဖီးတကျနပွေီမဟုတျလား။’ လို့ပွောလိုကျတော့သူလညျးသူခိုးလူမိ ဖွဈသှားပွီး ကွောငျနပေါတယျ။ကြှနျတျောလညျးနှုတျခမျးကို ပွနျနမျးရငျး ညဝတျဘောငျးဘီပျေါကနေ စောကျဖုတျကိုပှတျပေးလိုကျရာ ပေါငျလေးမသိမသာကားလာပွီး ကြှနျတေျာ့အနမျးကိုပါပွနျပွီးတုံ့ပွနျလာပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး ဘောငျးဘီထဲကိုထိုး သှငျးလိုကျရငျး အကှဲကွောငျးတဈလြှောကျ ပှတျသပျပေးလိုကျရာ သီရိခမြာ မကျြတောငျလေးပါစငျးကလြာပါတယျ။ ‘သီရိ..လာကှာ ဟိုမှာအိပျလိုကျနျော’ လို့ပွောကာကှဈပဈြပျေါ အသာလှဲခလြိုကျရငျး အကငြ်္ီကိုခြှတျလိုကျရာ အလိုကျသငျ့လေးခြှတျပေးပါတယျ။
ကြှနျတျောလညျးသီရိ နှုတျခမျးကိုစုပျလိုကျရငျး ကော့ထောငျနတေဲ့ သူ့နို့သီးလေးတှကေို လကျနဲ့ခွပေေးလိုကျရာ သီရိမှာကော့တကျလာပါတယျ။နောကျတော့ကြှနျတျောလညျး လညျတိုငျလေးကို ယကျပေးနရေငျး အောကျကိုဆငျးလာကာ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို အားနဲ့စို့ပေးလိုကျပါတယျ။ ‘အား..ကြှတျကြှတျ..ကိုကို ဖွညျးဖွညျး..’ လကျတဈဖကျက ဘောငျးဘီကိုဆှဲခြှတျပေးလိုကျရငျး စောကျဖုတျလေးကို လကျဝါးလေးနဲ့အုပျကာ ပှတျပေးလိုကျ ရငျး ပေါငျတှငျးသားလေးတှကေို လကျဖြားလေးနဲ့ဆှဲပေးလိုကျရာ ပေါငျလေးပါကားလာပွီး မရိုးမရှနဲ့ဖွဈလာပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး နို့စို့နရောမှ အောကျကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးဆငျးလာပွီး စောကျဖုတျနားရောကျတော့ အမှေးလေးတှကေို သှား နဲ့ကိုကျပေးလိုကျရာ သီရိလညျး ခါးလေးပါကော့တကျလာပါတယျ။
‘ကိုကို..ဘာတှလေုပျနတောလဲ သီရိငရဲကွီးကုနျပါ့မယျ ပွောလို့လဲမရဘူး.စိတျညဈပါတယျ’ ပါးစပျကသာငွငျးနတော လူကတော့ စောကျဖုတျနဲ့နှုတျခမျး မနီး နီးအောငျ နရောလိုကျရှပေ့ေးနပေါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး တမငျစောကျဖုတျကိုမထိအောငျ ဘေးနားတဈဝိုကျလြှောကျယကျပေးနရော တျောတျောကွာတော့ ‘ကိုရယျ လုပျမှာဖွငျ့ လုပျတော့ကှာ မနတေတျတော့ဘူး’ လို့ပွောကာ ခေါငျးလေးကိုလကျနဲ့ကိုငျကာ တညျ့ပေးလိုကျ ကြှနျတျောလညျး သနားသှားပွီး စောကျဖုတျအကှဲကွောငျးလေးတဈလြှောကျ လြှာစောငျးလေးနဲ့ အောကျကနပေငျ့ကာတငျ ပေးလိုကျပါတယျ။
‘အား..လား..လား..ရှီး..ကိုကိုရယျ ..ခဈြလိုကျတာ’ လို့ပွောကာ ခေါငျးလေးပါထောငျတကျလာပါတယျ။ကြှနျတျောလညျး စောကျခေါငျးထဲကို လြှာထိုးထညျ့လိုကျပွီး အထဲမှာလြှာ ကိုဝပေ့တျကာ ကစားပေးလိုကျရာ ‘အား..ကိုကိုရယျ..ကောငျးလိုကျတာ..’ လို့ပွောပွီး စောကျပတျနှုတျခမျးသားလေးတှကေို သူ့လကျနဲ့ဖွဲပေးပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး အထဲကလြှာကိုပွနျထုတျပွီး စောကျစလေ့ေးကိုပဲ ယကျပေးလိုကျရငျး လကျခလယျကို စောကျခေါငျးထဲထိုး သှငျးကာ အပျေါနံရံလေးကို သခြောပှတျပေးလိုကျပါတယျ။သီရိခမြာ အဖြားတကျသလို တဈကိုယျလုံးတုနျရီနကော ခေါငျး လေးပါ ဘယျညာရမျးနပေါတယျ။ ‘ကိုကိုရယျ..အရမျးကောငျးတာပဲ ညီမလေးကိုဆကျလုပျပေးပါ။
မရပျလိုကျပါနဲ့’ ကြှနျတျောလညျး ငါးမိနဈလောကျ ဆကျတိုကျလုပျပေးလိုကျရာ သီရိတဈယောကျ အထဲကလကျခလယျကို အတှငျးထဲက ကွှကျသားတှနေဲ့ ညှဈပေးနရေငျး ကော့ပွနျလနျကာ ငွိမျကသြှားပါတယျ။ ဒီတော့မှ ကြှနျတျောလညျး မကျြနှာအပျေါကိုတကျလာတော့ သီရိက အတငျးဖကျကာ ကြှနျတေျာ့ကိုအငမျးမရနမျးပါ တော့တယျ။ကြှနျတျောလညျး အလိုကျသငျ့လေးပွနျနမျးပေးလိုကျရငျး ပကျလကျလေးလှနျခလြိုကျပါတယျ။သီရိကလညျး ကြှနျတေျာ့နှုတျခမျးကိုနမျးနရေငျး အောကျကိုဆငျးသှားကာ ကြှနျတျောလီးတနျကွီးကို သူ့နှုတျခမျးထူထူလေးနဲ့ငုံကာစုပျပေး လိုကျပါတယျ။လကျတဈဖကျကလညျး ဂှေးဥတှကေိုနယျကာ ကစားပေးနတောမို့ ကြှနျတျောလညျး တျောတျောလေးကို အရသာတှနေ့ပေါတယျ။ အထဲမှာ လြှာကလေး လီးတနျအောကျပိုငျးတှကေို ကလိပေးနတောမို့ ‘အား..ကြှတျ..ကြှတျ..ညီမလေးရယျ။
အရမျးခဈြတယျကှာ’ လို့ပွောကာ ကြှနျတျောလညျး သူ့ခါးလေးကိုဆှဲကာ နောကျကနစေအိုဝလေးကို ယကျပေးလိုကျပါတော့တယျ။သီရိလညျး ခါးလေးတဈခကျြကော့သှားကာ လီးစုပျတာတှပေိုမွနျလာပါတယျ။နညျးနညျးကွာတော့မှ ‘သီရိလေး တျောတော့နျော ကိုကိုသီရိကို လိုးပေးတော့မယျနျော’ လို့ပွောကာ သီရိကိုပကျလကျအိပျခိုငျးလိုကျရငျး ပေါငျကွားထဲဝငျလို့ သခြောထိုငျကာ လီးတနျကိုအရငျးကနလေကျကကိုငျရငျး စောကျပတျအဝလေးဒဈဖြားလေးတကေ့ာ နညျးနညျးလေးသှငျးလိုကျပါတယျ။
‘နာလိုကျတာ ကိုကိုရယျ ဖွညျးဖွညျးလုပျပါ’ ‘ညီမလေး.ခဏလေးနျော’ လို့ပွောကာ စောကျစလေ့ေးကိုလကျမလေးနဲ့ပှတျပေးလိုကျ နညျးနညျးခငျြးသှငျးလိုကျ နဲ့လုပျပေးလိုကျပါတယျ။လကျတဈဖကျကလညျး အာရုံလှဲသှားအောငျလို့ နို့သီးခေါငျးလေးကို လကျညှိုးလကျမညှပျကာ ခွပေေးလိုကျ နို့အုံလေးကိုညှဈပေးလိုကျနဲ့လုပျပေးလိုကျပါတယျ။ သီရိခမြာ သူ့စောကျခေါငျးကဉျြးကဉျြးလေးထဲ လီးတနျကွီးကိုမဆနျ့မပွဲ အထညျ့ခံထားရတာမို့ နာလှသျောလညျး ကိုကို့ရဲ့ ကလိခကျြတှကွေောငျ့ နာကငျြတာတှတေောငျပြောကျသလိုဖွဈလာပါတယျ။ ‘သီရိလေး..ကိုနညျးနညျးသှငျးကွညျ့မယျနျော’ ‘သှငျးလကေို..ညီမလေးခံနိုငျမယျထငျတာပဲ’ ကြှနျတျောလညျး လီးတနျကို အဝပွနျထုတျလိုကျရငျး သီရိခါးလေးကိုလကျကကိုငျကာ နညျးနညျးအားစိုကျကာ ထိုးသှငျးလိုကျ ရာ စောကျခေါငျးထဲတနျးတနျးမတျမတျ တဈဝကျကြျောကြျောလောကျကိုဝငျသှားပါတော့တယျ။
‘အား..နာလိုကျတာကိုကိုရယျ..သပေါပွီ..မရဘူးထငျတယျ’ ‘ရပါတယျ..ညီမလေးရဲ့ အစမို့ပါ။တဖွညျးဖွညျးနဲ့ကောငျးလာလိမျ့မယျ’ ‘နာတယျကိုရဲ့..နာတယျ’ ကြှနျတျောလညျး ဘာမှပွနျမပွောတော့ပဲ အျောနတေဲ့သီရိပါးစပျကို ကြှနျတေျာ့နှုတျခမျးတှနေဲ့ပိတျကာ ဖိနမျးပေးလိုကျရငျး အောကျကလညျး ဆကျတိုကျညှောငျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ သီရိလညျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အရသာတှလေ့ာကာ ကြှနျတေျာ့ကြောကို သူ့လကျနဲ့တငျးတငျးကွပျကွပျလေးကို ဖကျထားပါတယျ။ကြှနျတျောလညျး နှုတျခမျးလေးကိုပွနျလှတျပေးလိုကျရငျး ‘ညီမလေး..ကောငျးလားဟငျ’ ‘ဟုတျ..ကိုကို..ကောငျးတယျ..အထဲကတော့နညျးနညျး အောငျ့တယျ..စပျလညျးစပျတယျ’ ‘စပျတာက အပြိုမွေးပေါကျသှားလို့ပါ။
အောငျ့တာကတော့ နောကျတဈခြီလောကျလုပျလိုကျရငျကောငျးသှားမှာ’ ‘ဟှနျးနျော..ကိုလူလညျ..ဘယျသူကနောကျတဈခါခံမယျလို့ပွောလို့လဲ’ ‘အေးပါ နောကျမှ လာခြှဲမနနေဲ့ မလုပျပေးဘူး’ ‘စတာပါကိုကိုရဲ့ ဒီညတော့ကိုကို့သဘောရှိလုပျ’ ‘နောကျညတှရေော’ ‘အောငျမလေး သေးပေါကျဖို့တောငျ အခြိနျမပေးတော့ဘူးထငျတယျ’ လို့ပွောကာ ကြှနျတေျာ့နှာခေါငျးကိုလိမျဆှဲ လိုကျပါတယျ။ကြှနျတျောလညျး သီရိလကျမောငျးအောကျကနေ ပခုံးလေးကိုလြှိုကိုငျကာ အားလေးထညျ့ကာလိုးပေးလိုကျ ပါတယျ။သီရိကလညျး တျောတျောလေးကောငျးလာတာမို့ အတှငျးသားလေးတှကေ ကြှနျတေျာ့လီးတနျကိုညှဈပေးနရော ကောငျးလှနျးတာကွောငျ့ တဈခကျြတဈခကျြ ဆောငျ့နတောတောငျရပျသှားပါတယျ။
‘ဆောငျ့ပါကိုကိုရယျ သီရိကိုမညှာနဲ့နျော အားရှိပါးရှိသာလုပျပါတော့နျော’ လို့ပွောလာပါတယျ။ကြှနျတျောလညျး အားသှနျကာလိုးပေးနရေငျး သီရိတဈယောကျ ကြှနျတေျာ့ကိုအတငျးဖကျကာ တအီးအီးနဲ့အသံထှကျကာ ပွီးသှားပါတယျ။ကြှနျတျောလညျး သူနဲ့အတူတူပွီးခငျြတာကွောငျ့ ထိနျးထားတာကိုလြှော့ခြ လိုကျရငျး သီရိစောကျခေါငျးထဲ သုကျရညျတှပေနျးထညျ့ကာ သီရိနှုတျခမျးလေးကိုစုပျရငျး တဈခြီပွီးသှားခဲ့ပါတယျ။
လီးတနျကိုမခြှတျသေးပဲ သီရိဗိုကျပျေါမှာ မှိနျးနလေိုကျပါတယျ။သီရိလညျး ကြှနျတေျာ့ခေါငျးလေးကိုဖကျထားကာ ဆံပငျတှကေို လကျခြောငျးလေးတှနေဲ့ ဖှပေးနပေါတယျ။ ‘ကောငျးလိုကျတာ..ကိုကိုရယျ..ညီမလေးကိုနတေို့ငျးလုပျပေးရမယျနျော’ ‘ဒါဆို နငျ့ကောငျနဲ့ဖွတျရမယျနျော’ ‘ဖွတျမှာပေါ့ကိုကိုရယျ။ညီမလေးထငျတယျ။သူ့ဟာက ကိုကို့လောကျကောငျးမှာမဟုတျဘူး’ ‘လုပျပေးမှာပေါ့ ညီမလေးရယျ၊ကိုကိုကထငျနတော ကိုကိုလုပျပွီးရငျ ညီမလေးမုနျးသှားမလားလို့’ ‘အမှနျပွောရရငျ အစကတော့မုနျးတယျ’ ‘အခုရော’ ‘အခုတော့..အငျး..မလိုးပေးရငျမုနျးပဈလိုကျမှာ’ လို့ပွောကာ ရှကျပွုံးလေးတဈပှငျ့နဲ့ ကြှနျတေျာ့ရငျခှငျထဲအတငျး ထိုးဝငျလာပါတော့တယျခငျဗြား။
ကျွန်တော့်အဖေ နောက်အိမ်ထောင်ပြုတော့ ကျွန်တော်ရှစ်နှစ်သားလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော့်မိထွေး မှာ သမီးတစ်ယောက်ပါလာပါတယ်။သူကလည်း ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူပါပဲ။မေမေ့နေရာကိုအစားဝင်လာတဲ့သူ ဖြစ်လို့ သူတို့ သားအမိနှစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်လုံးဝကြည့်လို့မရပါဘူး။နည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတော့မှ မေမေလေးရဲ့စေတနာ တွေ၊မေတ္တာတွေကိုနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။ဟိုကောင်မလေးသီရိနဲ့ကတော့ တစောင်းစေးနဲ့မျက်ချေးပေါ့။ကျွန်တော်က ကိစ္စတော်တော်များများမှာအလျှော့ပေးခဲ့ပေမယ့် သူကတော့ကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုမှကြည့်မရပါဘူး။သူ့အမေက ကျွန် တော့်ကိုအရေးပေးလို့လားမသိပါ။
ထားပါတော့လေ..ဒါတွေကငယ်ငယ်တုန်းကပါ။ အခုတော့ကျွန်တော်ရောသူပါ ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာတက်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒုတိယနှစ်၊သူကပထမနှစ်ပေါ့ ကျွန်တော့်မှာလည်းရည်းစားလေးဘာလေးနဲ့ပေါ့။သူကတော့ရှိသလိုလိုပဲ။ခက်တာက ကျွန်တော့်ကောင်မလေးက စာဂျပိုး ဗျ။ရုပ်ရှင်လည်းမကြည့်ရ။ပန်းခြံလည်းခေါ်မရနဲ့တော်တော်လေးတင်းတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ တစ်နေ့…. ‘ချစ် ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင်လေ’ ‘မနက်ဖြန် ကျူတိုရီရယ်ရှိတယ်ကွာ။မကြည့်ချင်ပါဘူး။ပြီးရင်မောင်ကလက်သိပ်သရမ်းတာပဲ’ ‘မဟုတ်တာကွာ။ကျူတိုရီရယ်ကဘာအရေးလဲ။လိုက်မှာလားမလိုက်ဘူးလားပြော’ ‘မလိုက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ကြောက်လို့ပါ။’ ‘ဒါဆို ကန်တင်း သွားမယ်လေ’ ‘မောင်ကလည်းကွာ ဟိုဟာတွေလာနေလို့ နောက်မှနော်အခုစာကျက်လိုက်အုံးမယ်နော်’ ‘အေးပါကွာ၊ပြန်ရင်ကောလိုက်ပို့ရမလား’ ‘မပို့နဲ့ ဖေဖေဝင်ကြိုလိမ့်မယ်’ ‘သွားပြီ။ဒီနေ့တော့ဘူပိတ်ပြီ ‘လို့စိတ်ထဲကနေရေရွတ်ရင်း ဖဲရှုံးလာတဲ့မျက်နှာနဲ့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်တက်ပြီးဆေးလိပ်သောက်မယ်ဆိုပြီး တက်လာရာ အပေါ်မှာလူရှင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဖြတ်လျှောက်လာရင်း အသံကြားလို့အသာလေးချောင်းကြည့်လိုက်ရာ အတွဲတစ်တွဲကိုတွေ့ရပါတယ်။ အောင်မယ်..ဒင်းကပေါက်စီစားနေပါလား။ကောင်မလေးမျက်နှာကိုတော့မမြင်ရဘူးပေါ့။ဟိုကောင့်လက်ကလည်း အငြိမ်ကိုမနေဘူးကောင်မလေးပေါင်ကြားထဲမှာ။ဆော်လေးကလည်းအလိုက်သိပါ့ ဒုတ်ကိုကိုင်ပေးနေပါလား။ရုတ်တရက် ကောင်မလေးက ဟိုကောင့်ရင်ခွင်ထဲကထလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ဒေါသတွေ ထောင်းခနဲဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဘယ်သူ များ လဲမှတ်တယ်။
ဒေါ်သီရိကိုး ဒင်းတောင်မှအမြီးပေါက်နေပြီပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်နဲ့မတည့်ပေမယ့် ဒီလိုမျိုးကျွန်တော့်ရှေ့မှာမြင်ရတော့ သနားလည်းသနားတယ်။ဒေါသစိတ်နဲ့ အတင်းဝင်ကာဆောင့်ခေါ်ချင်တဲ့စိတ်တွေလည်း ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လွန်လွန်ကျူးကျူးမဖြစ်ခင်ပေါ့။တော်သေးတာပေါ့ ဟို ကောင်တွေသာတွေ့သွားရင် ကျွန်တော့်မျက်ခွက်ကြီး ဘယ်သွားထားရပါ့မလဲ။ကင်မရာသာပါလာခဲ့ရင် ဒင်းတို့ရုပ်တွေ နက်ထဲမှာ ပလူပျံနေလောက်ပြီ။ဟာဟာ..ဒင်းကလေးကဟိုကောင့်ကို ပလွေတောင်မှုတ်ပေးနေပါလား။
ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ညီမလိုဖြစ်နေပေမယ့် ကြည့်နေရင်းလီးကတောင်လာပါတယ်။လီးတောင်နေရင်းက မကောင်းတဲ့အတွေးတွေပါဝင် လာပြီး ဆင်ကြံ ကြံနေမိပါတယ်။ဟာ..ဟုတ်ပြီ။… တစ်ယောက်တည်းကျိတ်ပြုံးလိုက်ရင်း ဆက်ကြည့်နေမိပါတယ်။အတော်ကြာတော့ အောက်ကတက်လာတဲ့အသံ တွေကြားတော့သူ့အကောင် ခပ်သုပ်သုပ်လေးထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်းအခန်းဝမှာစောင့်နေပါ တယ်။ဟော..လာပါပြီမရွှေချော။ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ သူတော်တော်လေးကိုထိတ်လန့်သွားပါတယ်။ ‘ကဲ..ဘယ်လိုလဲ တော်တော်လေးမှပျော်ကြရဲ့လား။’ ‘ကိုမိုး..နင်ဘယ်တုန်းကတည်းကရောက်နေတာလဲ’ ‘ငါ့ကိုဘာမှလာရှင်းပြမနေနဲ့၊ငါအကုန်မြင်ပြီးပြီ။အိမ်ကျမှနင့်အမေနဲ့ရှင်းကြပေတော့’ သူဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲ မျက်နှာကိုလက်ဝါးအုပ်ကာ ငိုချလိုက်ပါတယ်။နောက်မှ.. ‘ကိုမိုးရယ် ငါတောင်းပန်ပါတယ်။
မေမေသိရင်သတ်လိုက်မယ်။ပြန်တော့မပြောပါနဲ့နော်’ ‘နင့်ကိုယ်နင် နိုင်ငံခြားရောက်နေတယ်များမှတ်နေလားဟင် ဒါမြန်မာပြည်ဟဲ့’ ‘တော်ပါတော့..ကိုမိုးရယ် ငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာ..ငါ့ကိုသနားပါ။’ ‘တော်ပြီ ငိုမနေနဲ့တော့ ပြန်ကြမယ် ၊ အိမ်ကျမှငါစဉ်းစားလိုက်အုံးမယ် ပြောသင့်မပြောသင့်’ ‘လုပ်ပါဟယ်။ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါနင့်ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူး’ ‘အေး နင့်စကားတည်ပါစေနော်၊ ညဖက် လူကြီးတွေအိပ်ရင် ကားဂိုဒေါင်ဘက်ကိုလာခဲ့ ၊နင်နဲ့ငါဆွေးနွေးမယ်’ ‘ဟုတ်’ ‘ကဲပြန်ကြစို့၊အော်နေအုံး..ငါ့မှာပိုက်ဆံပြတ်နေတယ် နင့်မှာရှိရင် ၅၀၀၀ လောက်ပေးအုံး’ လို့ဆိုကာ ခပ်တည်တည်နဲ့ငွေညှစ်လိုက်တော့ ပြာပြာသလဲ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်ကာ ပိုက်ဆံတစ်ထပ်ကိုမရေတော့ပဲ လက်ထဲအတင်းထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။
‘အေး..နင်ကောင်းကောင်းပြန်နော်၊ဟိုဝင်ဒီဝင်လုပ်မနေနဲ့’ ‘စိတ်ချပါ’ ဆိုကာကျွန်တော့်ရှေ့ကနေထွက်သွားပါတော့တယ်။ ညနေဖက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူကျွန်တော့်အပေါ်မှာ လိုတာထက်ကိုပိုပြီး ဂရုတစိုက်လုပ်ပေးနေပါတယ်။မျက်လုံး လေးတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကိုအသနားခံတဲ့မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ပေါ့။မေမေလေးကတောင် ‘သားနဲ့သမီးအခုလို ချစ်ချစ်ခင်ခင်တွေ့ရတာ အရမ်းဝမ်းသာတယ်ကွယ်’ လို့တောင်ချီးမွမ်းပါတယ်။ ညစာစားပြီး ကျွန်တော်သူ့နားကိုကပ်ပြီး မေမေအိပ်ရင်ငါ့ကိုလာခေါ် လို့ပြောခဲ့ကာ အခန်းထဲဝင်ပြီးစာဖတ်နေပါတယ်။
ဆယ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ကျတော့ ကျွန်တော့်အခန်းတံခါးကိုလာခေါက်ပါတယ်။ ‘ကဲလာ ကားဂိုဒေါင်ဘက်ကိုသွားရအောင်’ ‘ဒီမှာပဲပြောပါလားကိုမိုးရယ်’ ‘ဟဲ့..ဒီမှာဆို နည်းနည်းလေးအသံကျယ်တာနဲ့ လူကြီးတွေနိုးကုန်မှာပေါ့’ လို့ပြောကာ သူ့လက်ကိုဆွဲကာ နောက်ဖေးပေါက်ကတဆင့် ကားဂိုဒေါင်ထဲကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကားဂိုဒေါင်ထဲကကွစ်ပျစ်လေးမှာ ထိုင်ကြရင်း ‘ကိုမိုး..ဘာပြောမှာလည်းဟင်’ ‘မပူပါနဲ့ နင့်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးပေးမှာပါ’ ‘မေမေ့ကိုတော့မတိုင်ပါနဲ့နော်’ ‘အေးလေ ဒါနင့်အပေါ်မူတည်တာပဲ၊ကဲရှင်းစမ်းပါအုံးနင့်ကိစ္စ၊နင့်အကောင်ကဘယ်သူလဲ၊ဘယ်ကလဲ’ ‘ဟို..ဟို..ဇူးကပါ။
တာမွေမှာနေပါတယ်။ဟုတ်ပြီ..နင်တို့ဒီလိုချိန်းတွေ့တာဘယ်နှစ်ခါရှိပြီလဲ’ ‘သုံးခါလောက်ရှိပါပြီ’ ‘နင့်ကောင်ကနင့်ကိုဘာတွေလုပ်လဲသေချာပြောစမ်း’ ‘ဟာ..ကိုမိုးကလည်းရှက်စရာ’ ‘အော်ဒါကျတော့ရှက်တယ်လား။ငါလုပ်လိုက်ရသေတော့မယ်။အေးမပြောရင်လည်းရတယ်’ လို့ပြောလိုက်တော့သူက ပြာပြာသလဲနဲ့ ‘စိတ်ညစ်ပါတယ်။ပြောပါ့မယ်။မေမေ့ကိုတော့ပြန်မတိုင်ပါနဲ့နော်’ ‘ဟုတ်ပြီ..ငါမေးတာကိုအစအဆုံးဖြေပေတော့’ ‘ဟုတ်’ ‘နင့်ကောင်ကနင့်ကိုချိန်းတွေ့ရင်ဘာလုပ်သလဲ။
ငါလည်းပညာယူမလို့’ ‘နမ်းပါတယ်။နှုတ်ခမ်းကိုပါ’ ‘နောက်တော့ရော’ ‘ငါမဖြေချင်ဘူးဟာတော်ပါတော့’ ‘မရှည်နဲ့၊ဒါဆိုငါသွားမယ်’ လို့ပြောလိုက်ရင်းလှည့်ထွက်လိုက်တော့ သူကလက်မောင်းလေးကိုဆွဲကာ ‘နေပါအုံး။ပြောပါ့မယ်။ပြောပါ့မယ်။ပြန်ထိုင်ပါ’ လို့တောင်းပန်ပါတယ်။ ‘ကဲပြောလေ’ ‘နို့ကိုကိုင်ပါတယ်’ လို့ပြောကာမျက်နှာနီမြန်းပြီးခေါင်းငုံ့သွားပါတယ်။ ‘ဆက်ပြောလေ၊နောက်ကော စို့ရောမစို့ဘူးလား’ ‘စို့ပေးပါတယ်။
‘နင်ကရောအသာတကြည်အစို့ခံတာပဲလား’ ‘ကိုမိုးနင်တော်တော်ဆိုးတယ်နော်၊ငါ့ကိုအကြပ်ကိုင်တယ်’ ‘မဖြေချင်ဘူးလား’ ‘ဟို..ဟို..ငါလည်းထူပူနေတော့ မရုန်းမိဘူးဟာ’ ‘နောက်ကော..စောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်သေးလား’ ‘အင်း’ ‘သေချာပြောလေဟာ’ ‘နှိုက်ပါတယ်။’ ‘နှိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲ။ဘောင်းဘီပေါ်ကနေပွတ်ပေးတာလား၊အထဲကိုနှိုက်တာလား’ ‘၂ ခုစလုံး’ ‘နင်ကမရုန်းဘူးလား။’ ‘ရုန်းတော့ရုန်းတာပဲငါ.ငါမပြောတတ်ဘူးဟာ၊နင်ကလည်းဘာတွေမေးနေမှန်းမသိဘူး’ ‘အဲဒီလိုအနှိုက်ခံရတော့ကော ကောင်းလား၊နောက်ကောဘာလုပ်သေးလဲ’ ‘နင်အကုန်မြင်ပြီးသားမဟုတ်လား’ ‘အေး…ဒါပေမယ့်ငါကြားချင်လို့’ ‘နောက်တော့ သူ့ဟာကြီးကိုလက်နဲ့ကိုင်ခိုင်းတယ်’ ‘နင်ကကိုင်တာပဲလား’ ‘ငါလည်းငြင်းပါတယ်ဟာ၊
ဒါပေမယ့်အောက်ကနေကလိနေတော့ဘယ်ကနေဘယ်လိုလုပ်ပေးမှန်းတောင်မသိဘူး’ ‘နောက်ကောဘာလုပ်ခိုင်းသေးလဲ’ ‘ပါးစပ်နဲ့စုပ်ခိုင်းတယ်’ ‘နင်ကစုပ်တတ်လို့လား’ ‘ငါလည်းဖီးတွေအရမ်းတက်နေလို့ သူခိုင်းသမျှမငြင်းမိပါဘူး’ ‘နင့်ကို အပြီးအထိစုပ်ခိုင်းလား’ ‘ပထမတခါတော့ လက်နဲ့လုပ်ပေးတာနဲ့ပြီးသွားတယ် နောက်တစ်ခါကျတော့ပါးစပ်ထဲမှာပြီးတယ်’ ‘နင်ထွေးပစ်လိုက်လား’ ‘ဟင့်အင်းငါကထွေးမလို့သူကငါ့ကို မျိုချခိုင်းတယ်။’ ‘အယ်တယ်ဟုတ်ပါလား။နင့်ဇာတ်လမ်းနားထောင်ရတာ ငါတောင်လီးတောင်လာပြီ ဒီမှာကြည့်စမ်း’ လို့ပြောက တောင်မတ်နေတဲ့ကျွန်တော့်လီးတန်ကို သူမြင်ရအောင်လုံခြည်လေးအသာလျှောပြလိုက်ပါတယ်။
‘အိုး..နင်နော်နင်’ ‘သေချာကြည့်စမ်း..နင့်ကောင်နဲ့ငါဘယ်သူကပိုကြီးလဲ’ ‘ဟာ…သေချင်တာပဲဟာ..နင်ကပိုကြီးတယ် ငါသွားလို့ရပြီလား’ ‘နေအုံး..ငါတစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်။နင်ငါ့ဟာကြီးကိုလာကိုင်ကြည့်စမ်း’ ‘အိုး..မဟုတ်တာဟယ်၊နင်မကြံကောင်းမစည်ရာတွေဟာ’ ‘ကြံကောင်းပါတယ်။နင်တောင်ဟိုကောင့်ကိုလုပ်ပေးနေကျပဲ၊နင့်ကောင်လို့စိတ်ထဲထားလိုက်ပေါ့’ ‘ငါမလုပ်ပါရစေနဲ့ဟာ၊ငါနင့်ကိုရှိခိုးပါတယ်’ ‘အခုမှမရတော့ဘူး သီရိ ငါဖီးတွေအရမ်းတက်နေပြီ’ ‘ငါ့ကိုလည်းသနားပါဟယ်။
နင်နဲ့ငါနဲ့မောင်နှမလေ’ ‘ဘာမောင်နှမလည်း..ဘာမှမတော်ဘူး’ ‘ဟို..ဟို..မသင့်တော်လို့ပါနော်’ ‘တော် မတော်သိချင်ရင် ထည့်ကြည့်မယ်လေ’ ‘ကိုမိုးရယ် နင်သိပ်ရက်စက်တာပဲ..နင်ငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်’ ‘ငါဘာမှ မနှိပ်စက်ပါဘူး။နင်တောင်မှဟိုကောင့်ခိုင်းသမျှလုပ်ပေးနေတာပဲ’ ‘ကိုမိုး..ငါငိုချင်လာပြီဟာ’ လို့ပြောကာုငိုချလိုက်ပါတယ်။ ‘ဒီမယ်..သီရိ နင်ငိုနေလည်းအလကားပဲ နင့်ကိုငါတစ်ခုပြောမယ်ငါ့ကိုကြည့်စမ်း’ ‘ပြော..ဘာပြောမှာလည်း’ ‘ငါပြောသလို လုပ်ရင် ငါနင့်ကိစ္စတွေကိုမသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်မယ်။ကဲအခုတော့ဒီကိုကြွ’ လို့ပြောလိုက်ရင်း သူ့ကိုယ်လုံးလေးကိုထူလိုက်ပါတယ် နောက်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ရင်း ‘ဒီမယ်..ငါ့ကိုကြည့်စမ်း’ လို့မျက်နှာကိုလှည့်လိုက်တော့ သူမျက်နှာလွှဲသွားပါတယ်။ ‘သီရိ..ဒီဖက်လှည့်စမ်း’ လို့ပြောရင်းမျက်နှာကိုခပ်ကြမ်းကြမ်းေးလလှည့်လိုက်တော့..အံကိုကျိတ်ကာကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပါတယ်။
မျက်ရည်တွေအရွှဲသားနဲ့ပေါ့။ ‘ဘယ်လိုလဲငါပြောတာဖြစ်မလား’ ‘အေးပေါ့လေ..နင်ကနိုင်ကွက်ရထားတာကိုး’ လို့ပြောကာမျက်စိမှိတ်ထားပါတယ်။ ‘သေချာပြီနော်’ လို့မေးလိုက်တော့ ခေါင်းလေးကိုညိတ်ပြပါတယ်။ ‘အေးဒါဆိုရင် ငါ့လီးကိုလာကိုင်ပေတော့’ လို့ပြောလိုက်တော့ ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီးနဲ့လာကိုင်ပါတယ်။ ‘ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါဟ..တော်ကြာပြုတ်ထွက်သွားမယ်’ ‘သေလည်းအေးတာပဲ’ ‘သီရိ နင်အသားနာချင်လို့လား သေချာလုပ်ပေးလေ’ လို့ပြောလိုက်တော့ ‘ကိုင်ထားတာလေ နင်မသိဘူးလား’ ‘ကိုင်ထားမှန်းတော့ငါလည်းသိတာပေါ့ နည်းနည်းပါးပါးပွတ်ပေးလေ နင့်ကောင်ကိုလုပ်ပေးသလိုမျိုးလေ’ လို့ပြောလိုက်တော့မှ လက်ကိုရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးပါတော့တယ်။ ‘ဘယ်လိုလဲ နင့်ကောင်ဟာနဲ့ငါ့ဟာဘယ်ဟာကကိုင်လို့ကောင်းလဲ’ လို့မေးလိုက်ရာ ‘တခြားစီ’ လို့မဲ့ကာရွဲ့ကာပြောလိုက်ပါတယ်။လုပ်ပေးနေရင်းကျွန်တော်က သူ့ကိုဆွဲဖက်လိုက်ရင်းပါးလေးကိုနမ်း လိုက်ပါတယ်။
သူကတွန့်သွားရင်းရုန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မလွှတ်ပေးပါဘူး။ ‘နင်ကငါနမ်းတာတောင်ဘာဖြစ်ရတာလဲ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်လှတာ’ လို့ပြောကာသူ့နှုတ်ခမ်းကိုအတင်းစုပ်လိုက် ပါတယ်။သူကလည်း အပြင်းအထန်ရုန်းပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း သူ့စောက်ဖုတ်နေရာကို စမ်းလိုက်တော့ စိုရွှဲနေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့မှ ‘သီရိ..နင်လိမ်မနေနဲ့တော့ နင်လည်းဖီးတက်နေပြီမဟုတ်လား။’ လို့ပြောလိုက်တော့သူလည်းသူခိုးလူမိ ဖြစ်သွားပြီး ကြောင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ခမ်းကို ပြန်နမ်းရင်း ညဝတ်ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်ပေးလိုက်ရာ ပေါင်လေးမသိမသာကားလာပြီး ကျွန်တော့်အနမ်းကိုပါပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘောင်းဘီထဲကိုထိုး သွင်းလိုက်ရင်း အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် ပွတ်သပ်ပေးလိုက်ရာ သီရိခမျာ မျက်တောင်လေးပါစင်းကျလာပါတယ်။ ‘သီရိ..လာကွာ ဟိုမှာအိပ်လိုက်နော်’ လို့ပြောကာကွစ်ပျစ်ပေါ် အသာလှဲချလိုက်ရင်း အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်ရာ အလိုက်သင့်လေးချွတ်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်းသီရိ နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်လိုက်ရင်း ကော့ထောင်နေတဲ့ သူ့နို့သီးလေးတွေကို လက်နဲ့ခြေပေးလိုက်ရာ သီရိမှာကော့တက်လာပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်လည်း လည်တိုင်လေးကို ယက်ပေးနေရင်း အောက်ကိုဆင်းလာကာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အားနဲ့စို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ‘အား..ကျွတ်ကျွတ်..ကိုကို ဖြည်းဖြည်း..’ လက်တစ်ဖက်က ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ဝါးလေးနဲ့အုပ်ကာ ပွတ်ပေးလိုက် ရင်း ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကို လက်ဖျားလေးနဲ့ဆွဲပေးလိုက်ရာ ပေါင်လေးပါကားလာပြီး မရိုးမရွနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နို့စို့နေရာမှ အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလာပြီး စောက်ဖုတ်နားရောက်တော့ အမွှေးလေးတွေကို သွား နဲ့ကိုက်ပေးလိုက်ရာ သီရိလည်း ခါးလေးပါကော့တက်လာပါတယ်။
‘ကိုကို..ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ သီရိငရဲကြီးကုန်ပါ့မယ် ပြောလို့လဲမရဘူး.စိတ်ညစ်ပါတယ်’ ပါးစပ်ကသာငြင်းနေတာ လူကတော့ စောက်ဖုတ်နဲ့နှုတ်ခမ်း မနီး နီးအောင် နေရာလိုက်ရွှေ့ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တမင်စောက်ဖုတ်ကိုမထိအောင် ဘေးနားတစ်ဝိုက်လျှောက်ယက်ပေးနေရာ တော်တော်ကြာတော့ ‘ကိုရယ် လုပ်မှာဖြင့် လုပ်တော့ကွာ မနေတတ်တော့ဘူး’ လို့ပြောကာ ခေါင်းလေးကိုလက်နဲ့ကိုင်ကာ တည့်ပေးလိုက် ကျွန်တော်လည်း သနားသွားပြီး စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် လျှာစောင်းလေးနဲ့ အောက်ကနေပင့်ကာတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။
‘အား..လား..လား..ရှီး..ကိုကိုရယ် ..ချစ်လိုက်တာ’ လို့ပြောကာ ခေါင်းလေးပါထောင်တက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း စောက်ခေါင်းထဲကို လျှာထိုးထည့်လိုက်ပြီး အထဲမှာလျှာ ကိုဝေ့ပတ်ကာ ကစားပေးလိုက်ရာ ‘အား..ကိုကိုရယ်..ကောင်းလိုက်တာ..’ လို့ပြောပြီး စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို သူ့လက်နဲ့ဖြဲပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အထဲကလျှာကိုပြန်ထုတ်ပြီး စောက်စေ့လေးကိုပဲ ယက်ပေးလိုက်ရင်း လက်ခလယ်ကို စောက်ခေါင်းထဲထိုး သွင်းကာ အပေါ်နံရံလေးကို သေချာပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သီရိခမျာ အဖျားတက်သလို တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ရီနေကာ ခေါင်း လေးပါ ဘယ်ညာရမ်းနေပါတယ်။ ‘ကိုကိုရယ်..အရမ်းကောင်းတာပဲ ညီမလေးကိုဆက်လုပ်ပေးပါ။
မရပ်လိုက်ပါနဲ့’ ကျွန်တော်လည်း ငါးမိနစ်လောက် ဆက်တိုက်လုပ်ပေးလိုက်ရာ သီရိတစ်ယောက် အထဲကလက်ခလယ်ကို အတွင်းထဲက ကြွက်သားတွေနဲ့ ညှစ်ပေးနေရင်း ကော့ပြန်လန်ကာ ငြိမ်ကျသွားပါတယ်။ ဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း မျက်နှာအပေါ်ကိုတက်လာတော့ သီရိက အတင်းဖက်ကာ ကျွန်တော့်ကိုအငမ်းမရနမ်းပါ တော့တယ်။ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့်လေးပြန်နမ်းပေးလိုက်ရင်း ပက်လက်လေးလှန်ချလိုက်ပါတယ်။သီရိကလည်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းနေရင်း အောက်ကိုဆင်းသွားကာ ကျွန်တော်လီးတန်ကြီးကို သူ့နှုတ်ခမ်းထူထူလေးနဲ့ငုံကာစုပ်ပေး လိုက်ပါတယ်။လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဂွေးဥတွေကိုနယ်ကာ ကစားပေးနေတာမို့ ကျွန်တော်လည်း တော်တော်လေးကို အရသာတွေ့နေပါတယ်။ အထဲမှာ လျှာကလေး လီးတန်အောက်ပိုင်းတွေကို ကလိပေးနေတာမို့ ‘အား..ကျွတ်..ကျွတ်..ညီမလေးရယ်။
အရမ်းချစ်တယ်ကွာ’ လို့ပြောကာ ကျွန်တော်လည်း သူ့ခါးလေးကိုဆွဲကာ နောက်ကနေစအိုဝလေးကို ယက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။သီရိလည်း ခါးလေးတစ်ချက်ကော့သွားကာ လီးစုပ်တာတွေပိုမြန်လာပါတယ်။နည်းနည်းကြာတော့မှ ‘သီရိလေး တော်တော့နော် ကိုကိုသီရိကို လိုးပေးတော့မယ်နော်’ လို့ပြောကာ သီရိကိုပက်လက်အိပ်ခိုင်းလိုက်ရင်း ပေါင်ကြားထဲဝင်လို့ သေချာထိုင်ကာ လီးတန်ကိုအရင်းကနေလက်ကကိုင်ရင်း စောက်ပတ်အဝလေးဒစ်ဖျားလေးတေ့ကာ နည်းနည်းလေးသွင်းလိုက်ပါတယ်။
‘နာလိုက်တာ ကိုကိုရယ် ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ’ ‘ညီမလေး.ခဏလေးနော်’ လို့ပြောကာ စောက်စေ့လေးကိုလက်မလေးနဲ့ပွတ်ပေးလိုက် နည်းနည်းချင်းသွင်းလိုက် နဲ့လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်တစ်ဖက်ကလည်း အာရုံလွဲသွားအောင်လို့ နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်ညှိုးလက်မညှပ်ကာ ခြေပေးလိုက် နို့အုံလေးကိုညှစ်ပေးလိုက်နဲ့လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီရိခမျာ သူ့စောက်ခေါင်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ လီးတန်ကြီးကိုမဆန့်မပြဲ အထည့်ခံထားရတာမို့ နာလှသော်လည်း ကိုကို့ရဲ့ ကလိချက်တွေကြောင့် နာကျင်တာတွေတောင်ပျောက်သလိုဖြစ်လာပါတယ်။ ‘သီရိလေး..ကိုနည်းနည်းသွင်းကြည့်မယ်နော်’ ‘သွင်းလေကို..ညီမလေးခံနိုင်မယ်ထင်တာပဲ’ ကျွန်တော်လည်း လီးတန်ကို အဝပြန်ထုတ်လိုက်ရင်း သီရိခါးလေးကိုလက်ကကိုင်ကာ နည်းနည်းအားစိုက်ကာ ထိုးသွင်းလိုက် ရာ စောက်ခေါင်းထဲတန်းတန်းမတ်မတ် တစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက်ကိုဝင်သွားပါတော့တယ်။
‘အား..နာလိုက်တာကိုကိုရယ်..သေပါပြီ..မရဘူးထင်တယ်’ ‘ရပါတယ်..ညီမလေးရဲ့ အစမို့ပါ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းလာလိမ့်မယ်’ ‘နာတယ်ကိုရဲ့..နာတယ်’ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲ အော်နေတဲ့သီရိပါးစပ်ကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ပိတ်ကာ ဖိနမ်းပေးလိုက်ရင်း အောက်ကလည်း ဆက်တိုက်ညှောင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သီရိလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရသာတွေ့လာကာ ကျွန်တော့်ကျောကို သူ့လက်နဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးကို ဖက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ရင်း ‘ညီမလေး..ကောင်းလားဟင်’ ‘ဟုတ်..ကိုကို..ကောင်းတယ်..အထဲကတော့နည်းနည်း အောင့်တယ်..စပ်လည်းစပ်တယ်’ ‘စပ်တာက အပျိုမြေးပေါက်သွားလို့ပါ။
အောင့်တာကတော့ နောက်တစ်ချီလောက်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာ’ ‘ဟွန်းနော်..ကိုလူလည်..ဘယ်သူကနောက်တစ်ခါခံမယ်လို့ပြောလို့လဲ’ ‘အေးပါ နောက်မှ လာချွဲမနေနဲ့ မလုပ်ပေးဘူး’ ‘စတာပါကိုကိုရဲ့ ဒီညတော့ကိုကို့သဘောရှိလုပ်’ ‘နောက်ညတွေရော’ ‘အောင်မလေး သေးပေါက်ဖို့တောင် အချိန်မပေးတော့ဘူးထင်တယ်’ လို့ပြောကာ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းကိုလိမ်ဆွဲ လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း သီရိလက်မောင်းအောက်ကနေ ပခုံးလေးကိုလျှိုကိုင်ကာ အားလေးထည့်ကာလိုးပေးလိုက် ပါတယ်။သီရိကလည်း တော်တော်လေးကောင်းလာတာမို့ အတွင်းသားလေးတွေက ကျွန်တော့်လီးတန်ကိုညှစ်ပေးနေရာ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် တစ်ချက်တစ်ချက် ဆောင့်နေတာတောင်ရပ်သွားပါတယ်။
‘ဆောင့်ပါကိုကိုရယ် သီရိကိုမညှာနဲ့နော် အားရှိပါးရှိသာလုပ်ပါတော့နော်’ လို့ပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း အားသွန်ကာလိုးပေးနေရင်း သီရိတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကိုအတင်းဖက်ကာ တအီးအီးနဲ့အသံထွက်ကာ ပြီးသွားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း သူနဲ့အတူတူပြီးချင်တာကြောင့် ထိန်းထားတာကိုလျှော့ချ လိုက်ရင်း သီရိစောက်ခေါင်းထဲ သုက်ရည်တွေပန်းထည့်ကာ သီရိနှုတ်ခမ်းလေးကိုစုပ်ရင်း တစ်ချီပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။
လီးတန်ကိုမချွတ်သေးပဲ သီရိဗိုက်ပေါ်မှာ မှိန်းနေလိုက်ပါတယ်။သီရိလည်း ကျွန်တော့်ခေါင်းလေးကိုဖက်ထားကာ ဆံပင်တွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဖွပေးနေပါတယ်။ ‘ကောင်းလိုက်တာ..ကိုကိုရယ်..ညီမလေးကိုနေ့တိုင်းလုပ်ပေးရမယ်နော်’ ‘ဒါဆို နင့်ကောင်နဲ့ဖြတ်ရမယ်နော်’ ‘ဖြတ်မှာပေါ့ကိုကိုရယ်။ညီမလေးထင်တယ်။သူ့ဟာက ကိုကို့လောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး’ ‘လုပ်ပေးမှာပေါ့ ညီမလေးရယ်၊ကိုကိုကထင်နေတာ ကိုကိုလုပ်ပြီးရင် ညီမလေးမုန်းသွားမလားလို့’ ‘အမှန်ပြောရရင် အစကတော့မုန်းတယ်’ ‘အခုရော’ ‘အခုတော့..အင်း..မလိုးပေးရင်မုန်းပစ်လိုက်မှာ’ လို့ပြောကာ ရှက်ပြုံးလေးတစ်ပွင့်နဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲအတင်း ထိုးဝင်လာပါတော့တယ်ခင်ဗျား။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ရှကျပွုံးလေးတဈပှငျ့